Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Cabdi Ileey oo Dilkii Marxuum Faysal Cagjar Ka Qaaday Sas & Walwal Joogto Ah.
Maqaal: Cabdi Ileey oo Dilkii Marxuum Faysal Cagjar Ka Qaaday Sas & Walwal Joogto Ah.
Posted by ONA Admin	/ December 1, 2016
Dilalka iyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed ee Ogaden wuxuu noqday wax joogta ah oo maal iyo darajo lagu doonto waana siyaasad iyo qorshe uu samastay gumaystaha Xabashida oo adeegsanaya Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) iyo xaabadiisa.
Habeenkii Jimcaha 28/10/2016 ayuu ahaa markay ciidamada gumaysigu intay afduubeen Marxuum Faysal Cagjar (36 jir) iyo Aabihii Muxumed Cagjar (70 jir) oo maxaabiis u ahaa oo ay waliba wakhti habeenimo ah (Jimce 28/10/2016 ) ama aroor hore ah (Sabti 29/10/2016 ) intay dileen Marxuum Faysal Cagjar ay hadana gaadhiga ka tureen baabuurkii meel aan ka fogayn degmada Dhanaan ee gobolka Shabeele.
Websiteka firimbi.net oo waxyaabaha uu qoro iyo sawiradda uu soo bandhigo yihiin kuwo ka turjumaya xaqiiqooyinka dhabta ah iyo xog ogaalnimo xaaladda dadka Soomaaliyeed ayaa waxyaabuhuu qoray waxaa ka mid ahaa xaalada dhimir iyo caafimaada ee Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley), qaababka iyo siyaabaha kala duwan ee uu ku laayo dadka shacabka ah, iyo waliba ficilka uu sameeyo iyo sida xun ee uu u laayo xaabada uu ku shaqaysto siday sheegtay firimbi.net ayaana maanta taagan.
Warbixintii 9-kii bishan waxaan ku sheegnay in Dhagar-Qabeyaashii dilay Marxuum Faysal Cagjar ay Jiif iyo Joogba qaban la’yihiin oo ay ku waasheesheen Dhagaxbuur iyo shacabkeeda. Markuu dhacay afduubkaa iyo dilkaa fooshaxun waxaa soo baxaya xaqiiqooyin ku tusuniya caadadii lagu yaqaanay gumayste iyo gumaste u shaqeeye iyo Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) oo jiif iyo joog midna qaban la’a.
Markuu dilku dhacay wuxuu Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) ku kacay xumaan dhamaanteed wuxuu lahaa waxbuu kuu tari ama dhiiga Marxuum Faysal Cagjar ayaa ku qarsoomi, waxaana ka mid ahaa:
Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) wuxuu amray xaabadiisii iyo dhagar-qabayaashii uu u adeegsaday dilkaa inay dadka Dhagaxbuur mashquuliyaan ooy ku furan mowjado been iyo borobogaandho ah waxaana ka mid ahaa fariimaha loo dhibaay inuu Marxuum Faysal Cagjar ahaa qof waalan
Arinkaa markuu socon waayay ayaa soo baxay xog ah in dhagar-qabayaasha hayaan filimo cadaymo noqon kara arinkaa oo sas iyo walwal galiyay Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) waxaana lagu amray xaabadaa inay ka fogaadaan Jigjiga waxaana laga cabsanayaa inay la kulmaan wufuud dowladda federaalka ka timid ooy xogtaa hoos ka siiyaan
Waxaa kale oo uu Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) uu amray wixii qurbaha ka yimid inay dhamaantood u digaan dadka ay isku qabiilka yihiin oo ayna soo qaadin tacadiyada xuquuq insaanka ee ka dhacaya deegaanka
Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) wuxuu gaadhi iyo lacag isku daray aabihii General Abraham waxaa kale oo uu u balanqaaday inuu dadajinayo dhamaystirka dhismaha hoteelka uu uga dhisayo Diridhabe
Hadaba xaalka Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) waa naag dhali way day aleelo ku waalatay waxyaabahaas oo dhan markay waxba way tari waayeen wuxuuna curaafkii u sheegay inuu qabto shir lagu qarinayo xaaladda dhabta ah iyo xaqiiqada jirta iyo dilkii foosha xumaa ee Marxuum Faysal Cagjar.
Shirkan oo lagu qabanayo magaalada Gunagado ayaa waxaa lagu amray dad ka badan laba kun oo ruux inay ka soo qaybgalaan waxaana ka mid ah dhamaan wixii shaqaale ah ama Liyu Boolis ku jiray ama magaalooyinka laga helay waana qasab inay iska xaadiriyaan goobta shirka.
Hadaba shirkan ma aha shir dadka ree Dhagaxbuur ee waa shir uu wato Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) asagoo adeegsnaya xaabo u dhalatay gobolka Jarar. Sida caadada ah iyo warbixinta gunaanadka shirka waxaa ugu muhiimsan oo shirka ka soo bixi doona sadex ama todoba qodob waxaana ka mid ah:
Arinka 1aad, 2aad & 3aad – Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) ayaa keenay nabadgalyo, cadaalada, iyo horumar waxaana ka mid ah (mashruuca biyo galinta ee Birqod-Gunagada-Danood-Gaashaamo) iyo (mashruuc lagu macaaneeyay ceelka dhanaha noqday ee Gunagado). Hadaba labadaa arimood ayaan micno ugu fadhiyin dadka gobolka Jarar waana been iyo dacaayad aan waxba ka jirin.
Aqoonta aan u leeyahay dhinaca biyo galinta iyo khibradda xafiiska biyaha waxay ku tusinayaan khiyaamada meesha ka jirta. Farqi ayaa u dhaxeeya (macaaneeynta biyaha) iyo (macaanaynta ceelka) macaaneeynta biyaha waa wax macquul ah ooy dadwaynuhu samaysan karaan, meesha macaanaynta ceelka ay tahay arin kale una baahan new technology waaxana sugaynaa wuxuu Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) goobta keeno.
Arinka 4aad, 5aad & 6aad – Jawaab looga dhigayo shirkii todaabkii hore EPRDF u qabatay kililada iyo shirka magaalada Nairobi kasocda Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) uu u arko inay kadhan yihiin ama kuwii uu ku dhiman lahaa, iyo waliba in lagu laayo qaar ka mid ah Dhagar-Qabeyaashii dilay Marxuum Faysal Cagjar. Dowladda federaalka waxaa gaadhay hadana soo gaadhay warbixinno gudaha iyo magaalooyinkii la sii mariyaya ama la soo mariyay Marxuum Faysal Cagjar iyo waliba dibadda dalka wuxuuna Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) doonayaa inuu shirkan uga faa’iidaysto danihiisa khaaska ah oo qaar ka mid saraakiisha ciidanka uu ka dharjiyo khamri iyo aduun si ay uga aamusaan xaalkiisa.
7aad – Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) wuxuu dooanyaa inuu kufsigii, dilkii iyo dhacii uu gaystay ama Xabashidu gaysatay uu dusha ka saaro kooxdii Al-Itixaad ee ka baxsatay waxyaabo kalana wuu ku soo darsan iyo eedayn ururka ONLF wuxuu kale oo uu rabaa Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) inuu caayo madax dolwadda deegaanka iyo federaalka oo ku khilaafsan wuxuu ka samaynayo deegaanka .
waxaa walwal ku ah ama hurdada u diidaya Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) dilkii marxuumka, shirar dibada iyo dalka ooy dadku kaga hadlayanaa dilkaa fooshaxun iyo shirkii EPRDF oo si cad loogu sheegay Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) inuu isbadal sal iyo baar ah imanayo waana arinka keenay shirkan qasabka ah.
Waxaa kaloo muhiim ah in madax badan la doonayo inaysan helin fursad ama wakhti ay kula xidhiidhaan dowladda federaalka ah inta uu shirku socdo marka ay qasab tahay in ayagana loo kaxeeyo oo lagu hayo goobta shirka oo loo diido wax fursad ah markuu shirku dhamaadana shir kale ayaa loo furi, qandaraasyo iyo xogo iyo wax isadabamarina way jiraan. Waxaa hubaal ah inuusan shirkan waxba ka badalaynin mwqifka asxaabta Marxuum Faysal Cagjar iyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) qarinayana uu banaanka iman Insha Allaha.
waxaa jira qoraalo iyo xidhiidhyo badan oo gaadhay doladda federaalka ah iyo hayayada deeqda siiya dalka iyo waliba xuquuqul insaanka waxaana loo sheegay dambiyada iyo dulmiga lagu hayo shacabka Soomaalida Ogadenya. Hadaba Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) galgalo ama orod, qayli ama aamus, quuq dheh ama qori jabi waxaa hubaal ah falaadhi gilgilasho kaagama hadho aduun ama aakhiro mar ay noqotaba waxaad gashayna waa lagaa gudi.